Goobaha Dalxiiska ee Sandals waxay u Dabaaldegayaan Muhiimad Muhiim ah Maalgelinta Cusub ee Kariibiyaanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Goobaha Dalxiiska ee Sandals waxay u Dabaaldegayaan Muhiimad Muhiim ah Maalgelinta Cusub ee Kariibiyaanka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Education • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • jiga • Waajib ah • Aroosyada Jaceylka Malabka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Sandals Resorts International (SRI) waxay ku dhawaaqday sannad-guuradii 40-aad ee ka soo wareegtay astaantii calankeeda ee lammaaneyaasha kaliya, Sandals Resorts. Tan iyo markii ay albaabadeeda ka furtay Montego Bay 27 -kii Nofembar, 1981, Sandals Resorts waxay ka farxisay martida, waxay la kaashadeen la -taliyayaasha socdaalka, waxayna gacan ka geysteen dhisidda dalxiiska ee Kariibiyaanka oo dhan, halkaas oo ay ka go'an tahay inay horumariso heer -sare ee martigelinta gobolka oo dhan, mid ka mid ah kuwa ugu meelaha dalxiiska adkaysi u leh ee adduunka.
Shirkadda dalxiiska ee raaxada waxay u dabaaldegaysaa 40 sano oo soo dhaweyn ah oo loo dhan yahay.
Waxay xuseysaa dhaxalkii aasaasihii Gordon “Butch” Stewart ”iyo aasaaska mustaqbalka.
Sandals Resorts waxay ku dhawaaqday Dugsi Cusub oo Martigelin, 40 mashaariic dalxiis oo beesha Kariibiyaanka ah, xaflado loo dalxiis tago, iyo qaar kaloo badan.
Shirkadda raaxada ee loo dhan yahay ee loo dhan yahay waxay u dabaaldegaysaa sannad-guurada sandals-ka iyagoo maamuusaya dhaxalka aasaasihii, Gordon 'Butch' Stewart, isagoo iftiiminaya saameynta dalxiiska ee bulshooyinka Kariibiyaanka ee maxalliga ah, oo saacadda dib ugu celinaya madadaalo nostalgic ah oo la qorsheeyay gudub dhammaan Sandals-ka loo dhan yahay ee loo dalxiis tago, waxayna sii wadi doontaa waxyaabo yaab leh oo dheeraad ah oo la soo bandhigi doono sannadka oo dhan.
“Sannadkan waxay u tahay astaan ​​taariikhi ah oo cajiib ah Sandals Resorts, waxayna si gaar ah macno u leedahay maadaama aan qaadno daqiiqaddan si aan u maamuusno waxa aabbahay abuuray oo aan ka sii wadno dhaxalkiisa sharafta leh ee Kariibiyaanka oo dhan,” ayuu yiri Guddoomiyaha Fulinta SRI Adam Stewart. “Tan iyo markii calanka la furay 1981kii Sandals Montego Bay, waxaan sii wadnay inaan sare u qaadno oo aan hoggaaminno goobta loo dhan yahay ee loo dalxiis tago. In ka badan intaas, waxaan soo bandhignay in qaar ka mid ah hal -abuurnimada soo -dhoweynta ugu xiisaha badan oo waarta ee warshadda laga abuuray Kariibiyaanka. Waan ku faanayaa inaan u dabaaldego dhacdadan muhiimka u ah shirkadeena oo ay weheliyaan qoyskeena Sandals -ka markaan eegno 40 -ka sano ee soo socda dhiirrigeliyay aragtida Caribbean iyo hal -abuurka. "
Iyada oo lagu maamuusayo sannad -guuradii 40 -aad, Sandals Resorts waxay ku faantaa inay ku dhawaaqdo:
Gordon “Butch” Stewart International School of Martigelinta iyo Dalxiiska
Iyada oo lagu sharfayo aasaasihii dambe ee Sandals Gordon “Butch” Stewart iyo halyeeygiisa hal -abuurka ganacsi iyo rumaynta nolosha oo dhan ee awoodda waxbarashada, Sandals Resorts International waxay ku dhawaaqaysaa dhismaha Gordon “Butch” Stewart International School of Hospitality and Tourism at The University of the University West Indies (UWI) iyo iyadoo lala kaashanayo Jaamacadda Caalamiga ah ee Florida (FIU) Chaplin School of Hospitality & Tourism Management. Labada hoggaamiye ee waxbarashada dalxiiska, FIU oo shuraako la ah UWI, waxay horumarin doonaan jiilka xiga ee dalxiiska caalamiga ah iyo hoggaanka martigelinta, iyada oo loo marayo barnaamij dhammaystiran oo shahaadada koowaad iyo qalin -jabinta ah. Dugsiga cusub wuxuu ku yaallaa Xarunta Galbeed ee Jaamacadda West Indies, Mona oo ku taal caasimadda dalxiiska ee Kariibiyaanka ee Montego Bay.
Meel-goyn, xarun cilmi-baaristu hoggaamiso, Gordon “Butch” Stewart International School of Martigelinta iyo Dalxiiska ayaa ardayda siin doonta fursado waxbarasho oo macno leh oo ka baxsan fasalka. “Aabbahay wuxuu rumaystay barashada waayo-aragnimada-‘ tababar shaqo-ku-qaadasho ah, ’sida uu inta badan u dhigo,” ayuu yiri Stewart. “Maadaama uu yahay ganacsade dhammaystiran iyo riyo -nololeed oo dhan, wuxuu ogaa in guushu ka dhalatay qolka guddida; halkii laga helay daqiiqadihii sahaminta iyo daahfurka. Waa dariiqaas oo dhiiri gelin doona manhajka heer caalami ah, oo ardayda gelinaya waaya-aragnimada dhabta ah ee qayb ka ah horumarkooda. ”
Maalgelinta waxbarashada ayaa muddo dheer ahayd mudnaanta SRI, dugsiga cusubna wuxuu dhammaystiri doonaa Jaamacadda Sandals Corporate, oo loo aasaasay inay siiso xubnaha kooxda Sandals ee fadhigoodu yahay Kariibiyaanka fursado ay ku hormariyaan oo ku hormariyaan xirfadaha shaqada oo ay ku kasbadaan shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo tan qalin-jabinta. "Markaan maalgelinno dadka Caribbean -ka, waxaan maalgelin ku samaynaynaa mustaqbalka gobolka," ayuu yiri Stewart.
40 for 40 Initiative: Mashaariicda Ka Faa'idaysanaya Bulshooyinka Kariibiyaanka
In kasta oo aysan ahayn erey markii Sandals la aasaasay afartan sano ka hor, ruuxa mas'uuliyadda bulsheed ee shirkadda (CSR) ayaa qayb ka ahaa dhismaha shirkadda tan iyo markii la aasaasay. "Xiriirka ka dhexeeya dalxiiska iyo samaqabka bulshooyinka Caribbean -ka ee aan ka hawlgalno lama dafiri karo," ayuu yiri Adam Stewart. Sharafta shirkadda 40th sannad -guurada, Sandals Resorts International, oo ay weheliyaan Sanduuqa Sandals, ururka aan macaash doonka ahayn ayaa la bilaabay 2009 si uu uga caawiyo SRI inay isbeddel ku samayso nolosha dadka Kariibiyaanka ah, waxay tilmaamaysaa afartan mashruuc oo sida ugu wanaagsan u soo bandhigaya xidhiidhka cajiibka ah ee u dhexeeya dalxiiska-warshadaha ugu saamaynta badan gobolka-iyo awooddeeda ay ku beddeli karto bulshooyinka Kariibiyaanka. noloshana hagaajiyo.
Mashaariicda waxaa laga dooran doonaa shan aag oo waaweyn: taageeridda beeraleyda maxalliga ah, tababarka martigelinta & shahaado -siinta, ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah, ka -faa'iideysiga farsamada gacanta ee gaarka ah iyo gaarsiinta bulshada. Laga soo bilaabo dadaallada ilaalinta deegaanka ee UNESCO goobta Dhaxalka Adduunka ee Buuraleyda Buluugga iyo John Crow ee Jamaica iyo hagaajinta awoodda beeraleyda si loo kordhiyo dadaalladooda ku aaddan wax soo saarka cuntada waara, si dhow loola shaqeeyo farsamayaqaannada maxalliga ah si sare loogu qaado kartidooda, xubnaha kooxda Sandals -ka ayaa soo rogaya inay gacmahooda kor u qaadaan si ay mashaariicdan nolosha ugu soo jiidaan waxayna ku martiqaadayaan martida inay ku soo biiraan.
Had iyo jeer Waqtiga Jasiiradda - Soo bandhigidda Sandals PalmCast
Sandals Resorts waxay bilaabaysaa wada-hadalka waxayna ku haysaa Kariibiyaanka safka hore iyadoo leh muuqaalkeedii ugu horreeyay abid, “Sandals PalmCast,” oo siinaya dhagaystayaasha xog-ogaal u noqoshada dhammaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhaca dhammaan meelaha lagu nasto oo leh 13- illaa 20-daqiiqo oo soconaya aragtiyaha khabiirnimada, dulmarka dalxiiska, iyo waraysiyo khaas ah oo layaab leh jidka. Iyada oo celcelis ahaan celceliska martida ku dhow 50%, martida Sandals aad bay daacad u yihiin waxayna aad u xiiseynayaan inay wax ka bartaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalxiiska iyo guud ahaan Kariibiyaanka oo ka yimid Sandals Resorts, oo ah danjiraha sumadda Caribbean -ka qiimeeya.
Guriga dhexdiisa, martidu waxay ku biiri karaan dabbaaldegga dhammaan Goobaha Sandals-ka iyagoo leh nuuxnuuxsi nostalgia oo ay ka mid yihiin:
Laga soo bilaabo OG ilaa mid aan caadi ahayn - Kadib & Hadda Cocktails Custom & Adeegga Barkadda Cusub
Maaddaama ay yihiin hal-abuureyaasha baarka dabaasha, Sandals-ku wuxuu ogyahay shay ama laba ku saabsan ku shubista cocktails-ka barkadda ku habboon. Astaanta ayaa u dabbaaldegeysa iyada oo abuuraysa qaar ka mid ah kuwa ugu cadcad oo cusub oo dib u soo celisa qaar asal ah. Martidu waxay hoos u qaadan karaan haadka xusuusta iyaga oo dhinac ka eegaya menu-ka is biirsiga ee 1981/2021 si ay u kala beddelaan dhadhanka iyada oo aan la isticmaalin mishiinka waqtiga si loo tago. Dhammaan Goobaha Dalxiiska ee Sandals waxay kaloo bilaabi doonaan adeeg cusub oo barkadda dabaasha ah oo u adeegaya cuntada fudud ee Kariibiyaanka ee dhiirrigelisay & menu is biirsaday si martidu u seexdaan barkadda barkadda muddo dheer. Intaa waxaa sii dheer, baararka iyo maqaayadaha ku yaal sumadda oo dhan waxay bilaabi doonaan waayo-aragnimo is biirsaday oo gacan-ku-samays ah oo cusub oo ka kooban siddeed cocktails cusub oo la diyaariyey iyadoo la adeegsanayo isku-darka dhadhanka gaarka ah, khamriga qaaliga ah, maaddooyinka cusub, iyo geedo-gacmeedyada laga soo qaatay beeraha maxalliga ah.
Kabaha Sandals Dib u Celinta Dhacdooyinka
Martida kabaha sandalku waxay u damaashaadi karaan sidii 1981kii oo kale oo leh dabbaaldegyo barkad oo toddobaadle ah oo gaar ah si loogu xuso 40 sano oo madadaalo ah. Martidu waxay qoyn karaan qorraxda halka wixii la soo dhaafay ay la kulmayaan mustaqbalka ay noolyihiin DJ -yada nool ee wareejinaya muusikada dhiirrigelinta leh iyo kuwa baarka ka shaqeeya ee u adeegaya is biirsadayda farshaxanka caadiga ah.
Ururinta Tafaariiqda Guryaha ee Dukaamada Dalxiiska ee Beach House
Sandals Resorts waxay bilaabaysaa EST. T-shaati iyo gurmad tafaariiqeed oo 1981-kii dhiirrigeliyay ayaa laga heli karaa dhammaan dukaammada loo dalxiis tago ee Beach House. Martidu waxay ka dooran kartaa toban naqshadood oo nostalgic ah oo firfircoon oo xushmeeya qaabkii aasaaskii Sandals, oo la heli karo iibsashada laga bilaabo Noofembar.
Ka sokow qorshayaasha hantida, Sandals-ka nasiibka leh waxay doortaan Abaal-marinnada iyo la-taliyayaasha socdaalka Khabiirka Kabaha Khaaska ah ee Muddada dheer Shahaadaysan ayaa sidoo kale lagu daaweyn doonaa casho-soo-celinta martida waxaana sidoo kale lagu casuumi karaa inay ku soo biiraan doonnida xuska Sanad-guurada 40-aad 'doonida saxiixa oo ku jirta socdaal dabbaaldegga dabbaaldegga ah oo ku teedsan xeebta Bari sannadka oo dhan.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan sida Sandals Resorts ay ugu dabaaldegeyso Sanadguuradeeda 40aad iyo inay la socoto wixii la yaab leh oo soo socda, hubi inaad booqato halkan.
Si aad u ballansato joogitaanka Sandals Resorts, booqo halkan.
Sandals® Resorts waxay siisaa laba qof jacaylka ugu jaceylka badan, Khibrad raaxo leh oo kujirta Kariibiyaanka oo ku taal 15 meelood oo xeeb leh oo qurux badan oo ku yaal Jamaica, Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, Grenada, iyo meesha cusub ee 16aad ee imaanaysa Curacao Abriil 2022 U dabbaaldegaya 40 sano, shirkadda ugu horreysa ee loo dhan yahay ee dalxiiska ayaa bixisa ka-mid-noqosho tayo badan marka loo eego kuwa kale ee meeraha. Goobaha Sandals -ka gaarka ah waxaa ku jira saxeexa Love Nest Butler Suites® ugu dambayn asturnaanta iyo adeegga; butlers oo ay tababartay Guild of Professional English Butlers; Red Lane Spa®; 5-Star Global Gourmet ™ cuntada, hubinta aalkolada khamriga sare, khamriga qaaliga ah, iyo maqaayadaha qaaska ah ee cuntada leh; Xarumaha Aqua oo leh aqoonsi iyo tababar PADI® oo khabiir ah; Wi-Fi dhakhso leh xeebta ilaa qolka jiifka iyo Sandals Aroosyada La Habayn Karo. Resorts Sandals waxay u dammaanad qaadaysaa martida nabada maskaxda laga bilaabo imaanshaha ilaa bixitaanka Borotokoollada Platinum Sandals ee Nadaafadda, tallaabooyinka caafimaad iyo badbaado ee shirkadda ee loogu talagalay inay martida siiso kalsooni aad u badan marka ay ku safrayaan Kariibiyaanka iyo sidoo kale Hubinta Fasaxa Sandals-ka cusub, oo ah barnaamij ilaalin fasax oo dhammaystiran oo ay ka muuqato dammaanad-warshadeed oo ugu horreysa fasax beddel bilaash ah oo ay ku jirto duulimaadkii martida saamaysay by joojinta safarka ee la xidhiidha COVID-19. Sandals Resorts waa qayb ka mid ah Sandals Resorts International (SRI) oo qoysku leeyahay, oo uu aasaasay Gordon “Butch” Stewart, oo ay ku jiraan Goobaha Xeebaha ee ku wajahan qoyska. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Sandals Resorts Luxury Include® farqiga, booqo sandals.com.